ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ (၃)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ (၃)
တပ်မတော်အစိုးရသ်ည ၁၉-၉-၈၈ ရက်နေ့တွင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ၂၇-၉-၈၈ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံရေးပါတီအား မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း ကြေညာခဲ့သည် ။
၃-၁၀-၈၈ ရက်နေ့တွင် ဒီမိုကရေစီပါတီကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း စတင် ကြေညာသည် ။ ထိုနေ့မှာပင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)ကို မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုကြောင်း ဆက်လက်ကြေညာသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၃၅ ပါတီအထိ မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြု ခဲ့သည်။
NLD ကို ၃၀-၉-၈၈ ရက်နေ့မှစပြီး မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က NLD ဌာနချုပ် လိပ်စာမှာ အမှတ်(၄၄)၊ တက္ကသိုလ်ရပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန် ဖြစ်သည် ။NLDကို ဒီချုပ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အောင်-စု-တင် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ လူသိများခဲ့သည် ။ မှတ်ပုံတင် စဉ်က NLD ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များမှာ -
(၁) ဦးအောင်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးတင်ဦး ဒုဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
(၄) ဦးကြည်ဟန် အတွင်းရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)
(၅) ဦးချစ်ခိုင် အတွင်းရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)
(၆) ဦးဝင်တင် အတွင်းရေးမှူး(အဖွဲ့ဝင်)
(၇) ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် စည်းရုံးရေးဌာနမှူး
(၈) ဦးလွင် ဘဏ္ဍာရေးမှူး
(၉) ဦးအောင်လွင် ပြန်ကြားရေးဌာနမှူး
(၁၀) ဦးအောင်ရွှေ စည်းရုံးရေးဌာနမှူး
(၁၁) ဦးကြည်မောင်` သုတေသနဌာနမှူးနှင့်
(၁၂) ဦးဘရွှေ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှူး တို့ ဖြစ်ကြသည်။
NLD သည် အရေးအခင်းကာလတွင် လူရှေ့ထွက် ဟုန်ရေးပြခဲ့သော ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်စုကြည်တို့ အုပ်စုသုံးခု စုပေါင်းဖွဲ့ခဲ့သော ပါတီဖြစ်သည်။ ဦးအောင်ကြီးသည် ၀ါရင့် ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပြီး သခင်အောင်ကြီး(ပေါင်း တည်) အမည်ဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ဖူးသူ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီလည်း ဖြစ်သည်။ အရေးအခင်း ဖြစ်လုကလေး၌ စာတို စာရှည်များ ပလူပျံအောင် ရေးပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်၍ NLD ၏ ဦးစီးဦးကိုင်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သဘောထားခဲ့သည်။ NLD ၌ ဦးအောင်ကြီးနှင့် ၄င်း လူ ၁၃ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၄ဦး ပါဝင်ခဲ့သည် ။
ဦးတင်ဦးကလည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဖြစ်ပြီး ၊ ၄င်းနောက်၌ မျိုးချစ် ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့ ရှိနေ၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိုးထွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဦးတင်ဦးအုပ်စုတွင် အခြားမျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းအဖွဲ့ဝင် ၁၃ဦးပါဝင်သည်။ ဒေါ်စုကြည်ကလည်း ၄င်းသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏သမီး၊ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ထွက်၊ နိုင်ငံခြားမှ လိုလားထောက်ခံသူ၊ ရွှေတိဂုံ၊ အနောက်ဘက်မုဒ် လူထုအစည်းအဝေးတွင် ဟောပြောစဉ် တက်ရောက်သော ပရိသတ်မှာ ဦးအောင်ကြီး၊ ဦးတင်ဦးတို့အဖွဲ့ထက် ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိသာလျှင် NLD၌ ပဓါနအကျဆုံးဟု ယူဆခဲ့သည်။
ကိုရဲ ထွန်း ခင်ဗျား၊
ဒီလို အချက် အလက်တွေကို တင်ပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြနိုင်လိန့်မယ်လို့ လေည်း မျှော်လငါ့နေပါတယ်။
ကျေန်ာလည်း comment တွေကို အခါအားလျှော်စွာ ရေးနေပါတယ်။
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ(၁၂)
ဒေါ်လာသူတောင်းစားများ၏ ဒီမိုနိုင်ငံရေး (၂)
ဒေါ်လာသူတောင်းစားများ၏ ဒီမို နိုင်ငံရေး (၁)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ(၁၁)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ(၁၀)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ(၉)
NLD က သွေးသစ်လောင်းပြီ
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ (၇)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ (၆)
NLD ပါတီ အမှားတော်ပုံမှား (၅)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ (၄)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ (၂)
NLD ပါတီ၏ အမှားတော်ပုံများ(၁)
Boost your popularity with the Spotlight - [image: Credits] Boost your popularity with the Spotlight! Want to be seen at the top of Twoo by loads of great people? Put me in the Spotlight Putting ...
Colombia နိုင်ငံ ရဲသန်တန်းကျောင်း တိုက်ခိုက်ခံရ - ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာ ကြာသပတေးနေ့က ရဲသင်တန်းကျောင်းတခုမှာ ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနဲ့ အသေခံကားဗုံးဖေါက်ခွဲမှုတခု ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့အတွက် အနဲဆုံး ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၅၄ ဦးထက်မန...
Myanmar National Anthem - မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်း ကမ္ဘာမကြေ တီးလုံးသံစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော် အလံနောက်ခံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ လိုအပ်သူများ သုံးစွဲနိုင်ရန် ပြုလုပ်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ D...